Xidhmada Semalt E-Commerce SEO - Qalabka ugu Fiican ee Abuurista Gaadiidka
Sida madal SEO iyo Suuq geyn, Semalt waxaa loogu talagalay dhowr adeegyo, dhammaantoodna waxay waxtar u yeelan karaan ganacsiyadaada e-commerce. Ma waxaad ka mid tahay kunka shirkadood ee ganacsiga elektaroniga ah ee ka baxsan halkaas? Mawaxaad raadineysaa adeeg bixiye la isku halleyn karo oo dammaanad qaadaya taraafikada dabiiciga ah ee websaydhkaaga? Hagaag, raadintaadii ayaa hadda dhammaatay. Halkan Semalt, waxaan la kulannaa dhammaan baahiyahaaga SEO. Si aad wax badan uga ogaato adeegyadayaga, waxaad guji kartaa halkan.
Ganacsade ahaan iyo ganacsade ahaan, waxaan fahamsanahay xanuunkaaga markaad gelineyso dadaalladaada, laakiin ma jiro qof qiimeeya. Waxaan kaa caawinaynaa inaad shirkadaada iyo meheradaada ka dhigto darajo meelaha ugu sareeya raadinta, halkaas ayaan kugu haynaynaa.
Adeegyadeenu kuma bixin doonaan keliya hal jeegood oo ah mooska ama pizza-kaaga ugu fiican; Waxaan si joogto ah kuugu siinnaa xaleef — habkan uma fiicna maalin, toddobaad ama bil. Ilaa iyo inta aad lammaane nala tahay, kooxdeena ayaa si joogto ah u falanqayn doonta bartaada internetka waxayna wanaajineysaa darajadeeda. Waxaan ku siin doonnaa qulqulka taraafikada ee joogtada ah kaas oo ka caawiya iibinta shirkaddaada.
Si aad u maamusho meherad ganacsi oo ganacsi oo guul leh maanta, waxaad u baahan tahay gaadiid aad iyo aad u tiro badan boggaaga. Laakiin intaas kuma filna; waxaad sidoo kale u baahan tahay riixyadaas si aad u sii joogto, u baarto boggaaga oo aad u hesho adeegyo ama alaab ay u baahan yihiin.
Marka muxuu u baahan doonaa shabakadaada inay ka takhalusto noocaas oo ay kuu keento faa'iidooyin waalan, sidoo kale jawaabtu waa sahlan tahay - xirmada Semalt e-commerce SEO.
Sirtayadu waxaay kujirtaa awooddeena aan u leenahay soo saarista dabiiciga ah ee dabiiciga ah. Waxaan aaminsanahay inaad maqashay SEOs, laakiin hadaadan walwalin; waxaan kuu haynaa qodobka ugu fiican adiga. Waa akhrin dhakhso ah oo fudud oo dhakhso kuu dheereeya. Halkan guji si aad ubarato aasaaska SEO.
Haddii aad aqoon u leedahay SEO, waad ogtahay in taraafikada dabiiciga ahi ay ka duwan tahay ilo kale oo suuq geyn websaydhkaaga. Kaliya maahan inaad hesho "daacad ah" riixyo, laakiin sidoo kale gabi ahaanba waa bilaash. Maadaama aan nahay ganacsi cusub, waxaan fahamsanahay in cagahaaga in aad cag dhigato aysan waligeed sahlanayn. Dhisidda cilaaqaad, la dagaallanka eeyaha waaweyn iyo bixinta waxa aad u baahan tahay oo dhan waxay noqon karaan wax adag. Tani waxay ka dhigeysaa mid ku xigta wax aan macquul aheyn inaad ku bixiso ololayaasha mushaarka ee makiinadaha raadinta.
In kasta oo adeegyadan lacagta lagu siiyay ay markiiba kuu riixayaan, maxaa dhici doona markaad lacag kaa dhammaato oo aad ku maalgaliso? Ma dammaanad qaadi kartaa in bartaada ay sii wadi doonto darajadaas? Tani waa sababta taraafikada dabiiciga ah ee SEO-ga ugu fiican uu ugu fiican yahay. Marka la raaco taraafikada dabiiciga ah, waad ogtahay in boggaaga internet uusan ku jirin sababta oo ah waxaad iska bixineysaa, laakiin waad ogtahay in E-commerce-kaaga SEO uu shaqeynayo xaaladaha ugu fiican.
Si kastaba ha noqotee, inta badan badanaa, milkiilayaasha ganacsiga e-commerce ma awoodaan inay ka faa'iideystaan faa'iidooyinka SEO. Ma hubo sida loo dhiso boggaga degitaanka, bogagga nagu saabsan ama bogagga ganacsiga / adeegga wax soo saarka. Arrintan ayaa mas'uul ka ah burburinta dhowr ganacsi oo lahaa awood weyn. Iyadoo aan la helin aqoonta iyo xirfadda lagu sawiro taraafikada, websaydhkaaga ayaa weli ah mid deggan oo ururiya boodhka internetka.
Ilaa intaad xaq u leedahay SEO-gaaga, kordhinta miisaaniyad xayeysiintaada wax fiican kama tareyso. Ma jiro dariiqo aad ku booqan karto degel adiga oo aan ka helin waxyaabo xiiso leh oo aad joogto. Laakiin waxaa jira hab looga baxo. Haddii aad dareento inaad ku dhufaneyso darbi markaad isku dayeyso inaad taraafikada u soo jiidato bartaada, waxaad u baahan tahay taabasho xirfadle ah. Iyo sida ka duwan websaydhyada kale ee badan, waxaan awoodnaa inaan awoodno, khibrad u leenahay oo aan adiga kaa dhigno adiga koowaad.
Si aan kuu siino waxa ugu fiican, kooxdeena waxay ka kooban tahay dhaqaaleyahanno, cilmi baarayaal, qoraayaal, iyo khabiir xaqiijinaya dhammaan baahiyahaaga iyo kan websaydhkaaga in la buuxiyay. Sidan, qofna fursad umaheysto inuu kugu garaaco meesha ugu sarreysa.
Aqoonta E-commerce ee wax ku oolka ah ee SEOs ee aad u adeegsan karto si lagu meeleeyo
Kahor intaanan bilaabin wada-hadalka qaar, waxaan soo saarnay talooyinkan oo ku saleysan cilmi-baaris ballaaran oo ku saabsan sida aan ku helnay websaydhyadayada hadda ku jira qiimeynta, fikradaha suuqa, isbeddelada hadda jira iyo waxqabadka ugu wanaagsan. Kahor intaadan isku dayin mid ka mid ah talooyinkan adiga kuu gaar ah, waxaan jecel nahay inaan sharaxno in degel kasta uu yahay mid gaar ah oo gaar ah. Taas macnaheedu waa inaanu jirin wax dammaanad qaad ah oo kan kuu shaqeeya. Si aad u hesho waxa ugu fiican, waxaad ubaahantahay waxa ugu fiican. U oggolow kooxdayada xirfadda leh inay dhex maraan bartaada oo ha siiyaan taabashada xirfadda leh.
Adiga laftiisa, isbedel kasta oo aad sameyso boggaaga waa in si taxaddar leh lagu sameeyaa.
U oggolow matoorada raadinta inay akhriyaan dib u eegista boggaaga
Mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee lagu soo jiito macaamiisha cusub waa iyada oo la sameeyo faallooyinka dadka da'da ah ee la arki karo. Tani waxay sidoo kale kordhineysaa aragtidaada macluumaadka gaarka ah ee ku yaal boggaaga sharaxaada. Qofna ma doonayo inuu ka iibsado iibiyaha aan lahayn wax faallo ah. Iyada oo khiyaamo badan oo internetka ah, waa inaad dhistaa kalsooni kahor inta wax iibsadayaashu ayan iska hubin adeegyadaaga. Daraasadaha ayaa muujiyey in ka badan 90% dadka isticmaala internetka waxay aamminsan yihiin iibsadayaasha dib u eegista. Iyada oo lagu soo bandhigayo dib u eegistaada ku saabsan matoorada raadinta, iibsadayaashu waxay isla markaaba dareemaan kalsooni ku saabsan bartaada iyo badeecada taas. Markaa, wax dhibaato ah kalama kulmayaan booqashada shabakadaada si ay kuu eegaan.
Iftiiminta dib u eegistaan sidoo kale waa mid weyn oo loogu talagalay dadaalada e-commerce SEO. Faallooyinka qaniga ku ah waxay xusayaan adeegyadaaga iyo ereyada kale ee muhiimka ah ee SEO ee wali ka muuqda boggaaga. Google ayaa aqoonsan kuwan, iyo shabakadaada waxay u tahay fursad fiican oo lagu gaari karo meesha ugu sareysa.
Faa'iidada ugu weyn ee dib u eegista iibsaduhu waa in ay siiyaan kuwa wax iibsada aragtida. Tani waa kaamil maxaa yeelay waxay la hadlayaan faa'iidooyinka aad ka bixiso aragti gaar ah.
Abuur Sharaxaad Meta oo Kooban
Sharaxaada Meta waa labiskaaga kulan kasta. Sida ay u egtahay waxay go'aamineysaa sida xubnaha guddigaagu ay adiga kuu qaadaan. Shaati jajaban oo xarig jabay ma kuu helayo heshiiskaas. Marka matoorada raadintu ku soo bandhigaan natiijo khadka tooska ah, waxay ku darayaan qoraal yar oo ka hooseeya mowduuca ama bogga internetka oo sharxaya waxaad ka heli laheyd haddii aad gujiso xiriirintaas. Taasi waa waxa aan u naqaanno metadata. Qalabkaaga metadata wuxuu muhiim u yahay qancinta isticmaaleyaasha inay guji xiriirintaada ee ma aha kuwa kale.
Qoritaanka sharraxaadda meta, oo aan furaha furaha ahi fiicnayn. Waxay la mid tahay daawashada xayeysiis aan xusin sheyga ay xayeysiinayaan. Maaddaama ganacsiga e-commerce ee si joogto ah u beddelaya badeecadiisa, sharraxaadda meta ayaa si joogto ah isu beddaleysa iyo helitaanka hab ay ku sii waddo ka-qeybgalka waxay noqon kartaa xoogaa dhib badan. Shirkad yar ahaan waqtigan dhumucda iyo fursadaha aadan haysan tiro badan tani waa sababta ugu badan ee ganacsiyada u doorbidaan khabiirada SEO sida Semalt inay caawiyaan.
Ugu dambeyntii, hubi in sharaxaadaada metadata ay tahay mid gaar ah. Akhristayaashaada ayaa raba inay aaminaan inaad ka duwan tahay oo gaar tahay xitaa kahor intaysan soo booqan boggagaaga.
Ka dhig faahfaahinta badeecadaada mid gaar ah
Waxyaabaha aan caadiga ahayn ayaa mudnaan u noqday tan iyo markii Google sii deysay barnaamijkeeda 'Panda algorithm'. Algorithm-kaani wuxuu diiradda saarayaa kor u qaadida tayada sare marka hore. Ujeeddada laga leeyahay horumarkan ayaa ahayd in la ciqaabo websaydhada nuqulada ka kooban boggaga kale.
Mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee lagu kobcin karo websaydhkaaga waa mid gaar u ah iyo waxyaabaha ku habboon SEO. Tani waxay ku gelineysaa booska ugu wanaagsan ee lagu arko iyo booqdayaashaada waxay la kulmaan dareen gaar ah oo fududeynaya iibsashada iyo talooyinka.
Mulkiileyaasha shabakadaha hore u jiray, waa wax xikmad badan inaad ka hubiso bartaada wax alla wixii suurto gal ah. Haddii aad aragto mid, dib u qor Kani wuxuu ku siinayaa faa iido tartamadaaga.
Adeegso calaamad qorsheysan
Calaamadeynta qorsheysan waa mid ka mid ah aaladaha ugu muhiimsan marka lala macaamilayo eCommerce SEO. Nasiib darro, waxay weli tahay mid ka mid ah aaladaha ugu isticmaalka badan ee SEO-ga SEO. Xaraashyadan yar-yar ayaa hagaajinaya natiijooyinkaaga iyagoo ku dhejinaya qiimeynta xiddigaha iyo calaamadaha qiimaha tooska ah Google. Ma aragtay inaad doorbideyso inaad ka dukaameysato websaydhyada meesha aad ku aragtid badeecada iyo qiimaheeda isla bogga natiijada Google? Taasi waa aalad muhiim ah oo aan u isticmaalno shabakadahaaga.
In kasta oo aysan tan tooska ahayn midda darajo sare ah, macluumaadkan muuqaal ahaan u wanaagsan ayaa siinaya dhiirrigelin dheeri ah isticmaale kasta si uu u taabto xiriirintaada.
Taabashadeena xirfadleyda ah iyo astaamahan oo dhan oo soo jiidasho leh, runtii majiraan wax sabab ah oo aadan nooga baahneyn inaad boggaaga u gaarto heerka ugu sareeya ee Google. Marar badan, waxaan isku dayeynaa intii karaankeena ah inaan yareyno qiimaha laakiin kharashkee? Adoo haysta caawimaad aan khibrad lahayn, waxaad si fudud u siineynin shabakadaada waxyaabaha ugu fiican. Qofna ma sameyn karo wax walba gacantiisa, laakiin maxaa yeelay waxaan sidoo kale dooneynaa inaan ka caawino ganacsatada inay koraan, adeegyadeena waa kuwo aad u jaban. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa wakiilladayada daryeelka macaamiisha halkan . Had iyo jeer waxay diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan baahiyahaaga. Waa dad saaxiibtinimo jecel oo jecel inay wax kaa maqlaan sidaa darteed ha iscasiinin. Waxay kaaga jawaabi doonaan dhammaan su'aalahaaga ku saabsan adeegyadeena ama su'aalaha la xiriira SEO. Waxaan sugeynaa inaan kaa maqalno.